Samsung na-ewepụta otu UI 2.1 Mmelite maka Galaxy Note 10 Lite | Gam akporosis
Samsung na-ewepụta otu UI 2.1 Mmelite maka Galaxy Note 10 Lite yana ọnwa nchekwa a
Ngwunye ngwa ngwa ọhụrụ na-abịa Galaxy Cheta 10 Lite, ụdị mkpụmkpụ nke usoro nke Galaxy Note 10 nke ghọrọ onye isi na August 2019, agbanyeghị na ebuputara ụdị Lite na Jenụwarị nke afọ a, si otu a bịarute naanị ya.
N'oge ngosi ya, ekpughere ya na gam akporo 10 n'okpuru usoro nhazi nke Samsung's One UI 2.0. Ihe ejirila One UI 2.1 dochie nke a nke dị ugbu a n'ọtụtụ n'ime arụmọrụ kachasị elu nke ndị nrụpụta South Korea dịka Galaxy S20. Ugbu a, a malitela ịnye ya maka Galaxy Note 10 Lite, yana ụdị kachasị nso nke nche nche nke kwekọrọ na ọnwa a nke Eprel.
Dị ka ọnụ ụzọ ụgbọ mmiri si kọọ GSMArena Dị ka anyị kwuru, mmelite ọhụụ ewepụtara maka ihe ngosi Galaxy Note 10 Lite gụnyekwara ọkwa nkedo nke afọ 2020. E nyere ụdị sọftụwia ọhụrụ a ka ọ bụrụ N770FXXU2BTD4 maka ụdị na Spain na United Arab Emirates, nke a na-enye ugbu a site na OTA, dị ka akụkọ kachasị ọhụrụ. O yikarịrị ka ọ ga-erute mba ndị ọzọ ugbu a, mana nke a bụ ihe ekwesịrị ikwenye. [: Choputa: [VIDEO] Nkọwa miri emi nke Samsung Galaxy S10 + vs Galaxy Note 10 +: duel nke ndị eze]
O doro anya na a ga-etinye OTA na ọkwa ụwa. Otú ọ dị, dị ka nke a bụ ngwugwu ngwa ngwa nke a ga-ahapụ nke nta nke nta, ọ nwere ike ọ gaghị adị na mpaghara niile maka awa ole na ole ma ọ bụ ụbọchị. Enwere ike ịnwale ndidi gị.
Ihe 3 kacha mma mkpọchi mkpọchi 2020 maka Samsung Galaxy Note 10+ (na ndị ọzọ Galaxy)
Dịka nyochaa, Galaxy Note 10 Lite bụ ngwaọrụ nwere ihu igwe Super AMOLED nke 6.7-inch nwere mkpebi FullHD + nke 2,400 x 1,080 pikselụ. Ihe nhazi ọ na-eburu bụ Exynos 9810, n'otu oge ahụ ebe nchekwa 6/8 GB RAM, oghere nchekwa dị n'ime nke 128 GB na batrị ikike 4,500 mAh nwere nkwado maka ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa dị n'okpuru mkpuchi. Nke a arụmọrụ dị elu. Anyị chọtara igwefoto nwere okpukpu atọ nke 12 + 12 + 12 MP na onye na-agba égbè 32 MP.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung na-ewepụta otu UI 2.1 Mmelite maka Galaxy Note 10 Lite yana ọnwa nchekwa a
Usoro Honor 9X bụ ihe ịga nke ọma ma rere ihe karịrị nde 10 na China naanị